Ndụ okirikiri nke ngwaahịa si n'echiche azụmahịa | ECommerce ozi ọma
Ihe mbu anyi kwesiri ima bu gini bu Ndụ okirikiri nke ngwaahịaDị ka anyị maara, cycles nwere nkebi nke ọkwa ọ bụla dị iche na nke ọzọ, Ha bụ akụkụ nke usoro nke, dị ka usoro ọ bụla, kwubiri.
Ekewara usoro nke ndụ a ụzọ anọ
1 Nkeji nke okirikiri
2 Kedu usoro nke ọ bụla nke usoro ngwaahịa nke ngwaahịa?
2.1 Nkeji 1: Okwu mmeghe
2.2 Nkeji 2: Uto
2.4 Nkeji nke atọ: Ntozu oke
2.5 Nkeji nke anọ: Mbelata
3 Gịnị bụ isi ihe na-eweta ihe ịga nke ọma?
4 Mgbasa ozi
Nkeji nke okirikiri
Site n'ịhụ ọkwa ndị a, anyị nwere ike ịchọpụta ihe nke ọ bụla na-ezo aka na ya, mana ọ pụtaghị nke ọma dịka ọ dị, yabụ n'okpuru anyị ga-eweta ha n'ụzọ zuru ezu hụrụ site echiche azụmahịa.
Kedu usoro nke ọ bụla nke usoro ngwaahịa nke ngwaahịa?
Nkeji 1: Okwu mmeghe
Oge a na-ezo aka nnabata ma ọ bụ “iwebata” nke ngwaahịa n’ahịa, na nke mbụ a na ọtụtụ ụdị na ngwaahịa ọ bụ ihe kacha mkpa, ebe ọ bụ na ihe ịga nke ọma nke a ga-adabere na "echiche mbụ".
Fọdụ usoro ndị bụ akụkụ nke ọkwa a bụ:
El guzosie ụghalaahịa na patent; Nke a bụ ime ka njirimara ngwaahịa a dị mma n’ahịa asọmpi na-abịanụ, wee nye onye na-esote ya nchekwa na ntụkwasị obi.
Isi ihe ọzọ bụ ọnụahịa na-ese okwu, enwere kemgbe ụdị atụmatụ abụọ n'oge a, nye ọnụ alas iji merie ahia na ndi ahia ma obu, bido ọnụahịa dị elu iji weghachite ulo oru mbo ka osiri belata ego ha.
Họrọ usoro kwesịrị ekwesị maka nkesa kachasị mma nke ngwaahịaIhe nkesa nkesa di nkpa, uzo nke ngwaahịa a gha adabere na nke a, odi nkpa iburu n'uche iche ụdị ndi nkesa ma obu ulo ahia ndi kwesiri maka ntugharia ahia gi na ebe ndi ahia kachasi.
Na nke ikpeazụ a ogbo, ma ọ dịghị ihe ọzọ, mgbasa ozi na mbido mbụ ga-ekwupụta ngwaahịa ọzọ gị na ahịaỌ bụ ihe amamihe dị na ya ime ya n’ebe kachasị ekwo ekwo, ịntanetị. Ntanetị bụ usoro kachasị dị irè na nke akụ na ụba maka ụlọ ọrụ na ngwaahịa ndị na-amalite amalite ụzọ ha.
Oge nke 2: Uto
Nke a ogbo amalite na- nke kachasị kwụsie ike ị ga-enwe n'ozuzu ya Ndụ okirikiri nke ngwaahịaMgbe ị gbalịsịrị ime ụzọ maka ngwaahịa gị n'ahịa, ị kwesịrị ịmalite ịgbanwe usoro gị na mmegharị, ụfọdụ usoro ị kwesịrị iburu n'uche bụ:
Bido ịhazi ọnụahịa gị, Agbanyeghị na ibido ịbanye ahịa buru ibu wee debe onwe gị dị ka ezigbo nhọrọ maka ndị ahịa nwere ọnụahịa dị mfe ịnweta, oge eruola ịmalite ịzụlite ha ntakịrị ma ọ bụghị nke ukwuu, Ọ dị mkpa chọta etiti ala n'etiti uru gị na elele nke ndị na-azụ ya. Ma ọ bụghị, iji a atụmatụ nke elu ahịa naghachi ulo oru mbo anya, ị ga-wedata haNke a, na-emerụ gị ahụ, ga - enyere gị aka iru ụdị ndị ọzọ na - azụ ahịa ma bulie ahịa gị niile, ị ga - amalite ịmata karịa gị ugbu a.
Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ debe àgwà gị na na mbido ị webatara, n'ahịa ka ndị ahịa gị meriri ruo ugbu a ghara ịda mbà iji nọgide na-azụ ngwaahịa gị, ịnwere ike ịgbakwunye ọrụ ọzọ ka o wee bụrụ ihe ọhụụ maka ndị ahịa na ị nwere merie site na mbu.
Tinye ego na mgbasa oziAgbanyeghị ibidola ịkpọsa ngwa ahịa gị n’ọgbọ mmepụta, ịkwesịrị ịmalite na mgbanwe ụfọdụ, otu n’ime ha bụ ego, oge eruola itinye ego na mgbasa ozi ndị ọzọ dịka mgbasa ozi ma mee ka ọ mara ihe. You maraworị ndị ndị ahịa gị nwere ike ịbịakwute ha, ị ga-aga, lekwasị anya nyiwe ahịa ọhụrụ gị na ndị ahịa a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na agbadoro ngwaahịa gị maka ndị na-eto eto, ị nwere ike ịmalite ilekwasị anya na nyiwe nke ụdị ndị na-ege ntị nwere ike iji ha, dị ka netwọkụ mmekọrịta na ịchọ mgbasa ozi mara mma, mara mma, dị ike ma dị mkpụmkpụ, ndị a isi ihe bụ ihe na-adọta uche nwa okorobịa nke na-elele netwọkụ ya anya ọ bụla nkeji 30 ọ bụla. Chọta ihe n'ezie jidere gị ahịa na-erigbu ya.
Dịka e kwuru na mbụ, gị ahia gha aghaghi iduga ndi ahia gi nile, nke ị gosipụtara na ha nwere mmasị na ya, mana ọ dịkwa mkpa na ị na-akụ nzọ n'ihu ọha iji bulie uru gị. Dịka anyị kwurula, ị ga-agbakwunye ụfọdụ ọrụ na ngwaahịa gị nke na-eme ka ọ maa mma, nke ahụ na-agbakwunye nke a, itinye ihe ọhụụ nwere ike ịdọta ndị na-ege ntị na-abụghị nke ị nwere.
Oge nke 3: Itozu
Ọ bụrụ na ngwaahịa gị eruola ebe a na-ekele gị, jisiri ike rute okenye okenye nke ahịaAnyị nwere ike ịsị na ọ nwetalarị nnukwu traction na ahịa yana na afọ ole na ole ọ kwụsiri ike na ahịa ya. Ọtụtụ ngwaahịa n'oge a na-ata ahụhụ site na ọdịda dị nso, mana gịnị mere? Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ịnọ n'ọma ahịa ma mepụta ọnụọgụ ahịa buru ibu, eleghara ịdị mma na ahịa nke ngwaahịa a anya. Mgbe ị nọ n'oge a, ọ bụghị naanị na ị ga-eweta ihe a merenụ, ị ga-enwe ike igosipụta njirimara ndị a:
Asọmpi a ga-eweta nke nta nke nta na ọ dị oké mkpa na-eguzo n'etiti ha, ị ga-emejuputa ọhụrụ njirimara ndị na-akọwa ngwaahịa na akara gị, nke a pụtara na ị mejuputa njirimara flagship, ka ndị ahịa wee nwee ike ịmata ọdịiche dị na ya na ndị ọzọ wee gaa n'ihu na-ahọrọ ịzụta ngwaahịa gị ma nweta iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa gị. Otu ihe atụ ga-abụ njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa Apple, njirimara pụrụ iche nke ga-eme ka anyị mata ọdịiche dị na ngwaahịa ha.
Dị ka anyị kwurula, a ogbo bụ otu nke kasị mma, kamakwa otu n'ime ihe ndị kasị egwuEbe ọ bụ na, ọ bụrụ na ị hapụghị ngwaahịa gị ka ọ na-ese, ihe ọzọ ọ ga-eme bụ ọdịda ya na ọdịda ya na ahịa, yana ịnọrọ na asọmpi ahụ, enwere atụmatụ na-enweghị isi na ọgụgụ isi. Bụ atụmatụ mejupụtara ịbelata ọnụahịa gị ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa asọmpiNke a ga - eme ka ị pụta ìhè n’etiti nhọrọ ndị na-azụ ahịa ma tinye onwe gị dịka ọnụọgụ na ahịa na mmasị. Nke a ga - enyere gị aka nwetaghachi ọtụtụ ndị ahịa ị tufuru kemgbe oge a niile, ị nwedịrị ike ị nweta ụfọdụ ndị ọhụụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ngwaahịa gị mara mma ị nwere ike ịmalite site na iji "nkwalite ma ọ bụ ego" ụzọ ga-eme ka ahịa gị kwalite. Gị onwe gị kwa pụrụ ime otú ahụ mejuputa comparative mgbasa ozi, ebe i jiri asọmpi gị tụnyere ngwaahịa gị na ndị ahịa mara uru ị na-enye.
Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ mee ka gị na ndị na-ekesa ya na ụlọ ahịa nwee mmekọrịta dị mma, Nke a ga - enyere ha aka ịga n’ihu na - ahụ gị dịka ezigbo nhọrọ n’ime mbọ gị, na ịghara ịhụ ngwaahịa ọhụụ dịka nhọrọ ha. Enwere ike iru nke a site na mkpali.
Oge nke 4: Ojuju
Nke a bụ agba ikpeazụ na nke kachasị njọ. Ọ bụrụ na ị lekọtaghị akụkụ nke ọ bụla gara aga, o yikarịrị ka ị ga-ahụ onwe gị na ọnọdụ a na-acha uhie uhie na ọnụọgụ a na-apụghị izere ezere. N'oge a enweghi otutu ihe ị ga-eme ma ị ga-achọta ọnọdụ siri ike ma ị kwesịrị ịmalite ịtụle nhọrọ ndị a:
Hapụ ngwaahịa ahụ n’ahịa ma bido ịgbanwe ya na nhazigharị ya, weghachite ngwaahịa gi wepukwa ya na onodu ojoo a.
Nhọrọ ọzọ bụ ịmalite ọnụ ala na ọnụahịa mmepụtaN'ụzọ dị otú a na uru na-amalite ịba ụba na ọ bụghị mfu, site n'ime ka ngwaahịa gị dị ọnụ ala karịa, ị ga-enwe ike ịga n'ihu na-ere ngwaahịa gị na ọnụ ala dị ala, mana jiri otu uru ahụ.
Nke ikpeazu bu ọrịre ụlọ ọrụ ọzọ na ikike ọzọỌ bụrụ na ị jụ ịbịa ebe a, ị nwere nhọrọ ikpeazụ, ịkwụsị ngwaahịa a na ahịa, wepụ ya nwa oge ma gbanwee ya, nyochaa isi ihe ndị na-adịghị mma ma dị mma ma wepụta ha ọzọ n'ọdịnihu.
Gịnị bụ isi ihe na-eweta ihe ịga nke ọma?
Ọ bụrụ n’ịchọghị ka ngwaahịa gị gabiga ọkwa iju ọ dị ezigbo mkpa ilekwasị anya na nke mbụ 3, ngwaahịa na mgbasa ozi na-aga n'ihu.
Ị ghaghị - mepụta nyocha ahịa ma mụọ ndị ahịa gị n'ụzọ miri emi, Chọpụta ihe dị ha mkpa ma ọ bụ otu ha nwere ike isi meziwanye ngwaahịa gị, ihe nwere ike ịzọpụta gị n'ọdịda n'ọdịnihu.
Y ewerela ịga nke ọma nke ngwaahịa a n'efu, Imirikiti ngwaahịa ndị na-apụ na ahịa bụ n'ihi nke ahụ, na-eleghara ihe ịga nke ọma nke ngwaahịa gị anya na-eme ka ụdị ndị ọzọ karịa ya. Mgbe ị hụrụ na ị malitere ịnọ n’ihe egwu, ọ bụ oge ime ihe, echekwala oge ịda mba.
Ghaa kpamkpam na mgbasa ozi, e nwere ọtụtụ puku ụzọ iji kwalite ngwaahịa gị, mgbasa ozi dị iche na ọtụtụ atụmatụ dabere na ndị na-ege ntị ịchọrọ iru, ọ dị mkpa ịmaliteghachi mgbasa ozi gị kwa oge nke mere na mmasị ndị ahịa anaghị efu.
Họrọ awa ziri ezi iji bido mgbasa ozi gị (awa nke ị ji n'aka na ndị na-eri gị ga-enwe ike ịhụ ya), agba mara mma, ihe ngosi na ike. Ọ bụrụ na ị gaghị eleghara ihe ọ bụla a kpọtụrụ aha, ngwaahịa gị ga-adịgide na ahịa ma nwee obi ike na ọ ga-abụ ngwaahịa na-aga nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ndụ okirikiri nke ngwaahịa